Kenya oo ka carootay markii garoonkeeda lala barbar dhigay Soomaaliya – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Kenya oo ka carootay markii garoonkeeda lala barbar dhigay Soomaaliya
Kenya ayaa ka carootay in garoonkeeda caalamiga ah ee Nairobi lala barbadhigay Soomaaliya waxayna dalbatay raaligelin.
Hadalka waxaa toddobaadkii la soo dhaafay jeediyay guddoomiyaha dallada shirkada diyaaradaha ee Australia kaddib markii shirkadda dulimaadka Qantas lagu khasbay diyaaradeeda inay bixiso $18,000 oo ganaax ah maadama ay si aan qorsheysnayn uga dagtay garoon ku yaalla dalka Australia.
Diyaaradda ayaa loo weeciyay garoonka Canberra oo ay muddo 8 daqiiqo ah ku sugneyd, maadaama ay hawada ay ku duuleysay xumeyd.
Mr. Graeme Samuel, oo ah guddoomiyaha waaxda oo ka hadlayay kulan ku saabsanaa duulimaadyada oo Australia ka dhacay ayaa ka carooday ganaaxa diyaaradda lagu soo rogay, isagoo yiri:
“Diyaarad si aan qorsheysnayn uga dagtay garoon ayaa lagu horgooyay gaari si aysan u duulin laguna khasbay inay $18,000 bixiso. Ma qiyaasi kara meel dunida ka mid ah oo arrintan oo kale ay ka dhici karto, malaha marka laga reebo Soomaaliya iyo Nairobi”, ayuu yiri Samuel.
Samuel ayaa intaasi ku daray in arrintaa lagu matali kara dhaqanka burcad badeedda Soomaalida oo kali ah.
Safiirka Kenya u fadhiya dalka Australia ayaa warqad cabsho ah u qoray wasaaradda arrimaha dibedda ee Australia, wuxuuna caro ka muujiyay arrintan wuxuuna sheegay “inay nasiib darro tahay in garoonka sida wayn loo qaddariyo ee Jomo Kenyatta aan lagu matali karin dhaqanka burcad badeedda.”
Wuxuuna sheegay in ”Kenya ay kumanaan ciidan u dirtay Soomaaliya si ay gacan u gystaan soo celinta nabadda dal ay dunida inteeda badan xaaladiisa iska indha tirtay’.’
Warqad uu u qoray safaaradda Kenya ee Australia ayaa ku sheegay inay wax ka khaldanaayeen xulashada erayadiisa.
Falastiini dhagxaan ku tuuray Askar Yuhuudi ah oo la dilay.